Realme Tarisa 2, iyo yakachipa-yekupinda-chikamu chikamu imwe kune inopfeka | Gadget Nhau
Miguel Hernandez | 06/07/2021 13:00 | Gadgets, General, Reviews, SmartWatch
Realme Inoenderera mberi kubheja pakupa iyo yakagadziridzwa kukosha kwemari mumidziyo yayo uye kusimuka kuna Xiaomi mundima mairatidzika kunge kutonga yega. Sezvinoitwa nemukwikwidzi wayo, Realme yanga ichipinda zvakanyanya uye zvakasiyana zvigadzirwa, uye mawatch aisazove iwo anosarudzika.
Isu tinotora zvakadzama kutarisa iyo nyowani Realme Watch 2, iyo yakachipa kwazvo vhezheni yeRealme kukwezva vashandisi kune yavo yekutanga kupfeka. Tsvaga nesu ruzivo rwatakave narwo maererano neiyo wachi yekambani yeAsia uye kana ichinyatso kukosha pamutengo wayo wakaderera.
Semazuva ese, isu takaperekedza ongororo iyi nediki vhidhiyo kubva kuchiteshi chedu che YouTube, mairi uchakwanisa kukoshesa kusakwana kweinboxing kweiyo Realme Tarisa 2 pamwe chete neyekutanga uye yakapusa yekumisikidza nhanho. Tora mukana kunyorera kuchiteshi chedu YouTube Nekuti nenzira iyoyo unogona kutibatsira kuramba tichikura uye kukuunzira ongororo dzechokwadi pawebhu. Kana iwe wakazvifarira, mutengo paAmazon wakaderera zvekuti zvinokushamisa.
1 Dhizaini: Rundarira iyo yaida kuve yakangwara wachi
2 Kubatana uye sensors
3 Screen uye kuzvionera
4 Shandisa ruzivo
Dhizaini: Rundarira iyo yaida kuve yakangwara wachi
Panyaya yekugadzira, isu tinoshamiswa nekureruka kwakanyanya kweiyi Realme Watch, yakavakwa mu "jet nhema" mapurasitiki, iyo mhando ine chinokwezva chakakoshesa kukwenya. Mukuonekwa iri wachi, ine yechinyakare chimiro uye saizi yeiyo smartwatch, zvisinei, patinongoibatidza tinoona kuti kumberi kumberi bezel, ndinofungidzira kuti ingangoita 35% kana isinga wandei, uye izvo zvinokonzerwa nediki diki 1,4-inch pani yehukuru hwe 257.6 x 35.7 x 12.2 mm. Sezvatakataura, huremu hunoshamisa pasi, 38 chete magiramu izvo zvinoita kuti unzwe, Ned Flanders maitiro, kunge usina kupfeka chero chinhu.
Iine bhatani rerutivi rakagadzirwa nepurasitiki yakasiana, Nemugwagwa wakaringana wekushandisa kwechinyakare uye unoshanda kudzikamisa zvishuwo zvedu.
Isu tine imwechete nzvimbo magnetized kuchaja base, Nemipini miviri yesimbi, inoshanda nemazvo uye ine urefu hwakareba. Ine 22-millimeter tambo yakagadzirwa nesilicone nekuvharwa kwakati siyanei. Chiyero chakaringana uye chakachengeterwa madhora mazhinji, kunyangwe kuomarara kwacho kunogona kukuita iwe nekukanganisa, sezvakaitika kwatiri, unoisimbisa zvakanyanya kupfuura zvakafanira. Tambo yemugwagwa-yekushandisa nguva dzose iyo ine "hook" yepasirese, musimboti isu tichakwanisa kuisa chero chaunoda, kunyangwe Realme iri chokwadi chekuburitsa tambo dzakasiyana muhupenyu hwese hwechigadzirwa.
Kubatana uye sensors
Realme haina kuita yeruzhinji data nezve processor, RAM uye kuchengetedza kweiyi Realme Watch. Nezve izvo zvekupedzisira, isu tinofungidzira kuti zvakaringana kuve nematanho akasarudzika akasiyana, zvirinani tichifunga kuti manejimendi yezvinyorwa zvemultimedia zvinogumira kune kure kure kutonga kweyakaenderana nhare mbozha. Kune zvese izvi, zvinoshandisa MAKARALI USB 5.0 nekubatana kuri nyore kuburikidza Realme Link, iyo yatinoyeuka, inoenderana nezvose zviri zviviri Android uye iOS.
Iyo ine matatu akabatana accelerometer kuverenga kufamba zvakanaka uye kuongorora mashandiro edu seanopedzisa sezvinobvira. Isu tine panguva imwechete iyo yakasarudzika sensor yemoyo uye inozadzikiswa ne oxygen saturation sensor muropa zvakajairika mazuva ano. Mamwe mashoma kugona kwatinga taure, hatina WiFi kana GPS, zviri pachena kuti tinokanganwa nezve LTE kana chero imwe tekinoroji isina waya, asi hazvo, isu tiri kutaura nezve mudziyo ane mutengo unosetsa, Hapana munhu aigona kukubvunza zvachose chero chinhu chinopfuura izvo zvaunazvo muchikamu chehunyanzvi. Izvo zvakakosha kuti utaure kuti hama yayo "Pro" inokwanisa yeGPS geopositioning pachayo.
Screen uye kuzvionera
Isu takawana pani ye de 1,4 inches, inopa resolution yakazara ye 320 x 320 pixels, ndokuti, huwandu hwema pixels mazana matatu nemakumi matatu nematatu. Zvinoshamisika kuti resolution yacho yave yakadzikira zvishoma pane iya yehama "Pro", inopa pixel density yakakwira zvakanyanya kupfuura iyo ye "inodhura" vhezheni yechigadzirwa. Iyo skrini inopa akasiyana ekupenya marongero kune yayo LCD pani, mune yedu bvunzo yakaratidza zvinopfuura zvakaringana Zvekushandisa kwekunze kwemarudzi ese, ichizvidzivirira nemazvo zvese pakuratidzira zvemukati uye kana ichitaurirana nazvo, inopindura nenzira kwayo kusangana kwepanyama.
Kana iri bhatiri, tine 315 mAh iyo inopa yeoretical uptime zvinoenderana neRememe yekutenderedza mazuva gumi nemaviri, mumiyedzo yedu tasvika pazuva regumi pasina matambudziko, Kunyangwe iwo matanho akavimbiswa neiyo brand asina kusvika, inogara padhuze padhuze, zvinoenderana nekushandisa kunoitwa nechishandiso nemushandisi wega wega. Iko kubhadharisa kuzere kunozotitorera zvishoma kudarika awa.
Isu tawana chishandiso chine mabasa ekutanga akaratidzirwa, kunyangwe uine smartwatch yepamberi iwe uchaziva kuti 90% yezvaunoshandisa iri mune izvi Realme Tarisa 2, kunyange chiitiko, hongu, zviri pachena zvakaderera mutengo. Tine mamiriro ekunze ekufungidzira, anopfuura makumi mapfumbamwe emhando dzakasiyana dzekudzidzisa uye matanho akakosha ekuongorora mitambo nguva nenguva, zvese izvi zvinoratidzwa mu Realme Batanidza, chishandiso chinopa pfupiso uye kutaridzika kutarisika, asi izvo zvichatibvumidza kuti tishandure iwo mabhora nekukurumidza.
Weather forecast (haisati yashandurwa nemazvo muchiSpanish)
Tsvaga foni modhi
Kamera kure kudzora
Mazuva ese Nhanho Chinangwa Kupedzisa Chiyeuchidzo
Chigadzirwa chine IP68 kushorwa kwemvura, Kunyangwe iyo isina kugadzirirwa kushambira nayo, ichave inopokana neakakosha splashes, saka inokwanisa kumira kudzidziswa kwedu pasina dambudziko.
Isu tine, sekutaura kwatamboita, rundarira runoda kuve wachi. Iyo skrini ine yakati kurei dhizaini dhizaini pane zvakajairwa, asi mashandiro haapfuure izvo zvinopihwa neimwe nzira mumutengo, iyo Xiaomi Mi Band 6. Kana iwe uchida mudziyo unewatch aesthetics uye zvakakosha zvekuita, Kune makumi mashanu ema euro ayo anodhura, kune mashoma dzimwe nzira senge iyo Realme Watch 50.
Yakatumirwa pa: 6 de julio de 2021
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » SmartWatch » Realme Watch 2, iyo yakachipa-inodhura yekupinda-chikamu chikamu kune anopfeka